Raiso maimaimpoana ny Afterlight amin'ny fampiharana Apple Store | Vaovao IPhone
Androany dia nampahafantarinay anao fa ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny App Store dia nanjary nalalaka voalohany hatramin'ny nidirany tao amin'ny magazay fampiharana Apple. Monument Valley dia mety ho ny fampiharana ny herinandro ary, raha hita fa izany dia tsy ho izy irery no fampiharana izay ao anatin'ny fampiroboroboana Apple, satria manomboka androany dia afaka mahazo ihany koa isika maimaimpoana tanteraka ny fampiharana Afterlight, fa tsy maintsy ampidinintsika avy amin'ny fampiharana Apple Store izy io.
Zava-dehibe ny manizingizina fa raha te hahazo Afterlight maimaimpoana mandra-pahatapitry ny fampiroboroboana, tsy maintsy sintomintsika amin'ny fampiharana Apple Store izy io, tsy avy amin'ny App Store. Ny voalohany dia ny fivarotana fitaovana Apple, izay ahafahantsika mividy iPhone, Mac na fitaovana hafa eo amin'ny sisiny; ny faharoa dia ny fivarotana app Apple. Ireto misy dingana tokony harahina hahazoana Afterlight maimaimpoana.
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana Afterlight
Manokatra ny fampiharana Apple Store izahay. Zava-dehibe ny tsy hampifangaro azy amin'ny App Store.
Nilalao tao amin'ny Stores izahay.
Mihosinkosina isika. Izay ahitantsika ireo teboka telo, dia misosa miankavia isika mandra-pahitantsika ny fampiroboroboana.
Tsindrio ny kisary Afterlight.
Mikasika ny lahatsoratra fotsy miaraka amina tontolo maitso izay milaza izahay fa misintona maimaim-poana. Tsy maintsy manamafy sy mametraka ny teny miafin'ny Apple ID izahay.
Niresaka momba ny fanavotana izahay.
Ho an'ireo izay tsy mahalala an'io, ny Afterlight dia rindranasa mamela antsika amboary ny sarinay manova ny mifanohitra, mazava, loko, mampihatra sivana sns. Tsy fampiharana feno tahaka ny Pixelmator na ny Enlight izy io, saingy tsy mikasa izany koa izy ary, etsy ankilany, ny vidiny ivelan'ny fampiroboroboana dia ambany ihany koa, mijanona amin'ny 0,99 € Afterlight dia mikendry ny hanatsara ny sarinay nefa tsy mampiasa fitaovana izay manova endrika azy ireo, zavatra mahatratra tonga lafatra. Andramo izany dia holazainao amiko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Raiso maimaimpoana ny Afterlight amin'ny fampiharana Apple Store. Atorinay anao ny fomba
Jeff Rodriguez dia hoy izy:
Tsy afaka mankany amin'ny app Apple store aho. Fantatrao ny antony?
Valiny tamin'i Jeff Rodriguez
Tsy hitako akory ny ampahany amin'ilay teboka 3, tsy haiko ny antony
Tsy azoko atao amin'ny olona iray ny manampy ahy.
Hugo Sanz dia hoy izy:
Ny zava-mitranga dia tsy maintsy manova ny toerana misy ny fireneny izy ireo ary manova azy avy any Mexico mankany Espana aho ary tao no nahitako ilay fangatahana toy ny sary etsy ambony, ovay ny Toerana.
Efa misintona ny fampiharana maimaimpoana aho
Valiny tamin'i Hugo Sanz
Sary tsara Pablo, tiako io tiako io hahahahaha
xD no rindrambaiko iPad-ko. Mivoaka izany satria ao amin'ny sariko mivantana}: o)
PS: ny sary voasivana dia ny tavako mandehandeha manodidina. Izaho dia mivoaka miaraka amin'ny makiazy virtoaly ho an'ny lahatsoratra iray izay tsy maintsy ataoko xd dia tsy ho hitan'ny besinimaro xd velively ireo sary ireo
LinkedIn dia mamoaka fanavaozana ho an'ny iOS miaraka amin'ny fanovana lehibe
Ny bibikely WhatsApp dia manakana anao tsy hanoratra anaty vondrona